Maamulada Puntland iyo Galmudug oo iska kaashanaya ammaanka - Home somali news leader
Home NEWS Maamulada Puntland iyo Galmudug oo iska kaashanaya ammaanka
Maamulada Puntland iyo Galmudug oo iska kaashanaya ammaanka
Kulan loogaga hadlayay iskaashiga arrimaha amniga ee maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug.
Mas’uuliyiinta Maamulada gobolka Mudug ee Puntland & Galmudug oo kulankan ka qeybgalay ayaa waxaa ay sheegeen in la isku afgartay in la xoojiyo iskaashiga labada dhinac ee arrimaha ammaanka.
Guddoomiyaha Gobolka Mudug ee Puntland Cabdi ladiif Muuse Nuur ayaa sheegay inay kulanka diirada ku saareen la dagaalanka Al-Shabaab, arrimaha sugida Amniga doorashooyinka sidoo loo xadidi lahaa sarifka iyo ka hortegida dagaalada dhex-mara maleeshiyo beeleedyada iyo arrimo kale.
Sidoo kale Guddoomiyaha Gobolka Mudug ee Maamulka Galmudug Cabdiraxmaan Diiriye Isxal ayaa sheegay in labada maamul iyo Ciidamadadooda ay ka mideysan yihiin sugida Amniga degaannada galmudug una diyaarsan yihiin inay ka hortagaan falalka Amni darro.
Mas’uuliyiinta labada maamul ayaa isku raacay in laamaha Amniga Gobolka ay si wadajir ah u fuliyaan howlgallada amniga lagu sugaayo, isla markaana wada-shaqeyntaas ay tahay mid horumar amni u horseedeysay Shacabka labada Maamul.
Previous articleDonald Trump oo muujiyay inuu ka tagayo Aqalka Cad
Next articleWasiirka Maaliyadda Ethiopia oo sheegay in howlgalada Tigreyka si dhaqso ah lagu soo afjarayo